सिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ बाँडफाँटकाे मितिबारे के भन्छ बिक्री प्रबन्धक ? कतिले पाउलान आइपिओ ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyसिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ बाँडफाँटकाे मितिबारे के भन्छ बिक्री प्रबन्धक ? कतिले पाउलान...
सिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ बाँडफाँटकाे मितिबारे के भन्छ बिक्री प्रबन्धक ? कतिले पाउलान आइपिओ ?
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओ बाँडफाँट शुक्रबार गर्ने तयारी गरिएको छ । बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलका अनुसार अहिलेसम्मको तयारी अनुसार शुक्रबार (चैत २७ गते) बाँडफाँट गर्ने योजना भएको छ । यद्यपि, औपचारिक रुपमा भने बाँडफाँटको मिति घोषणा हुन बाँकी छ । रुजु गर्ने काम अन्तिम चरण्मा भएकाले बुधबार प्री–अलोटमेन्ट गरेर शुक्रबार बाँडफाँट गर्ने योजना रहेको बिक्री प्रबन्धकको भनाई छ ।
यता, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै भर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ । यसमा कुल २ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । १६ लाख ३५ हजार ५३७ जनाले २ करोड ४६ लाख ६५ हजार ६४० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो मागको तुलनामा ९.३४ गुणा बढी हो ।
यसआधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको २६ लाख ९४ हजार कित्तालाई आधार मान्दा २ लाख ६४ हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने देखिएको छ । १३ लाख ७१ हजार ५३७ जना भन्दा धेरै आइपीओ पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । सिंगटीले चैत ६ गतेबाट १० गतेसम्म १०० रुपैयाँ दरको कुल २९ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
यसमध्ये ५८ हजार कित्ता कर्मचारी र १ लाख ४५ हजार कित्ता म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याएर बाँकी २६ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको थियो । यो आइपीओलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले ‘केयर एनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ । उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम रहेको संकेत गर्दछ ।
Previous articleसतिप्रथा अन्त्यका लागि योगमायाको ठूलो योगदान : प्रदेश प्रमुख अधिकारी
Next articleपर्यटकको चाप बढेपछि शहर छाडेर गाउँ फर्किँदै घरबास सञ्चालक चित्रेवासी